Shiinaha BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Bulldozer Track Shoe Plate Assembly iyo alaab-qeybiyeyaasha | Bonovo
Guud ahaan sooc
Codsiga Qodista, Xamuulka, Bulldozer.etc.
Hardness oogada HRC37-49
Noocyada tixraaca iyo moodooyinka
Lagu dabaqi karo dhammaan mashiinada nooca wadada
Sidee Loogu Xulaa Ballaaran Kabo Si Xikmad Leh?
Qalab mashiinkaaga si aad u maareyso xaalada deegaanka qaaska ah, adoo isticmaalaya kabaha ugu cidhiidhiga yar ee suurtogalka ah ee wali bixiya sabeynta iyo shaqada ku filan.
Kabo aad u cidhiidhi ah ayaa sababi doona in mashiinku deggo. Inta lagu guda jiro leexashada, dhamaadka gadaasha mashiinka ayaa isbedelaya, taas oo keeneysa waxyaabo xad dhaaf ah inay ka soo baxaan dusha sare ee kabaha taas oo markaa ku dhacda nidaamka isku xidhka isku xidhka maadaama mashiinku sii socdo. Waxyaabaha si adag loo xirxiray ee ku dul dhejisan meertada ayaa laga yaabaa inay sababaan hoos u dhigida xiriirka nolosha sababo la xiriira iskuxirka oo ku dul wareegaya walxaha la buuxiyay, taas oo sidoo kale sababi karta rullaluistarka xamuulku inuu joojiyo leexashada;
Si kastaba ha noqotee, kabo yar oo ballaadhan ayaa siin doona sabayn wanaagsan oo ururin doona wax yar sababtoo ah maaddadu way ka fog tahay nidaamka isku-xidhka-isku-xidhka. Laakiin haddii aad doorato kabo aad u ballaaran, way qalloocin karaan oo si sahal ah ayey u jajabin karaan, waxay sababi karaan xirnaan kordhay dhammaan qaybaha, waxay sababi karaan kala-goysyo qalalan oo dhicis ah, waxayna dabci karaan qalabka kabaha.
Bakhaar & Bakhaar
Markii ugu horreysay ee laga iibsado Shiinaha? Hubi nidaamka amarkan
Hore: BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Kabaha SK100, SK200, SK300, SK320
Xiga: BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Excavator Track Shoe Bulldozer Track Plate Assembly
kabaha cagafta cagaf
suufka raadraaca birta
kabaha track excavator
kabaha loogu talagalay socodka
seddex jeer grouser
kabo saddex jibbaar ah